Haadholiif Biyyi Jireenyaaf Gaarii fi Hamtuu Ta'e Eessa?
Sanbata Diqqaa, Guraandhalaa 06, 2016 Local time: 01:02
Presidantiin jaarmayaa save the children kan ta’an Kaaroliin Maayiils dilbata dhufu kabajamee kan oolu guyyaa haadholii sababaa gochuun gabaasni ba’e waggaa kana biyyoota 165 qorachu ibsan.
Biyyoota kana keessatti haadholiin attamiin akka da’an qoranne kan jedhan Maayiils kun haadha ta’uuf iddoo gaarii fi hamtuu taatte hubachuuf hedduu gargaara jennee yaanne.
Save the children akka jedhutti addunyaa irratti haadholiif iddoo gaariin biyyiNoorweey durboota fi dubartootaaf barumsa waliin ga’uuf akkasumas yeroo dubartiin deessu ogeessonni wajjin jiru. Kun haadhaaf da’umsi salphaa akka ta’u gargaara.
Biyya haadha deessuuf addunyaa irratti hamaa dha jedhamu NIjeer ta’uu gabaasni ba’e hubachiiseera.Dubartoota da’an sadii keessaa harka tokko qofatu carraa ogeeessa deesiftuu argachuuf danda’a. Shamarran immo waggaa 4 qofaaf barumsa argatu.
Niger keessatti dubartoonni giddu galeessaan waggaa 56 qofa jiraatu. Norway keessatti garuu waggaa 83 jiraatu.
Gabaasaa Guutuu MP3tuquun dhaggeffadhaa
Most ViewedGamtaan Afrikaa Haala Oromiyaa Keessa Jiru Hordofaan Jira Jedhe“Mootumman Itoophiiya Tarkkanfii Oromiyaa Kessatti Fudhate Dogoggora Ta’u Amanee jira,” Ministirii Dhimma-alaa Yunaaytid Isteetsitti Itti Aantuu Ministeera Dhimmoota Afrikaa.Hiriira Jalduu fi Bulee Horaa, Deebii Angawaa GujiiKFO: Reebichi, Hidhaa fi Ajjeechaan Ittuma Fufee JiraMormii Qellem Wallagga Keessaa fi Bakkawwan BirooMost Listened Gabaasni sagalee kunooti Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Guutummaa qophii keenyaa dhaggeeffadhaa Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa Gabaasa guutuu armaan gaditti dhaggeeffadhaa